२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १३:४०
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका उप–प्रमुख यमुना घर्ती संग दैनिकअभियान डटकमका लागि पत्रिकाका प्रधान–सम्पादक आजाद खड्काले लिएको ताजा अन्तरवार्ता–सम्पादक
यमुना जी यहाँलाई दैनिक अभियानको अन्तर–संवादमा स्वागत छ ।
धन्यवाद हजुर र हजुरको पत्रिकालाई
लकडाउले बंगलाचुलीमा के कस्तो असर पारेको छ ?
यहाँ सबैभन्दा यी असार मसान्त आईसकेको छ । मान्छेहरुले योजनाको कामहरु गर्न पनि कठिनाई भैइरहेको छ । योजनाको कामहरु पुरै रोकेका त छैनौ । तर पनि घोराहीबाट पास लेउन अलि कठिनाई भैरहेको छ । यो पहाडि भुगोल हो । यहाँ खाद्या पदार्थको उत्पादन कम हुन्छ, सबै कुरा हामीले घोराहीबाट ल्याएर खानु पर्ने हुन्छ । आवत जावत कम हुने र बजार पनि नखुल्ने भयको हुँदा खानपिनको समस्या भयको छ । विभिन्न रोगका विरामीहरुले समयमा उपचार पाईरहेका छैनन् । यहाँ प्राथमिक उपचारत हो,अलि गम्भिर उपचार गर्नु पर्यो भने घोराही पुग्नु पर्ने हुन्छ । तल जान सक्ने अवस्था पनि छैन । यी कारणहरुले हाम्रो पालिकालाई केहि प्रभाव पारेको छ ।
तपाईको पालिकाको जनसंख्या र घरधुरी संख्यावारे हजुरलाई यकिन छ ?
हाम्रो गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या चौविस हजार दुई सय पैतालिस रहेको छ । हाम्रो गाउँपालिकामा कुल घर धुरी संख्या चार हजार ७ सय तिस रहेको छ ।
लकडाउनका कारण विपन्न वर्गले मजदुरीको भरमा बाच्ने त्यस्ता मानिसहरुको संख्या कति छ , हजुरहरुलाई यकिन छ ?
हाम्रो गाउपालिकामा विपन्न जस्ले श्रम गरेर मात्र खान वाध्य छन उनिहरुको संख्या अहिलेसम्म ८ सय यकिन गरियको छ । थप दुई जनामा हुनसक्ने अनुमान छ । त्यस्ता मानिसहरुलाई पालिकाले स्वंयम आउन भनि रहेका छौ । अहिलेसम्म ८ सय घरधुरीलाई छ नम्बर चामलका दरले राहत वितरण गरेका छौ ।
आठसय घरधुरी संख्यालाई राहत वितरण कसरी गर्नु भयो ?
हामिले छ लम्बरका दरले चामल वितरण गरेका छौ ।
एक पटक दियको चामलले अहिलेसम्म पुग्यो ?
हामीले दुई तिन लट बाँडि सक्यौ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि जोडिरहेका छौ । त्यसैले पनि केहि राहत भयको छ । अलि अलि योजनाको कामहरु गर्नेतिर पनि लागिरहेको छ । त्यस्ता पनि विपन्न वर्गलाई मजदुरि गरिखाने बाटो भयको छ । लास्टै छाक बसेको अबस्थामा रहेकाहरु सम्बन्धित वडामा आउनु हुन्छ र वडा अध्यक्षले यहाहरुको कुरा सुनेर समस्या समाधान गर्नुहुन्छ ।
वैठकबाट निर्णय गरेर राहत वितरण गर्नुहुन्छ कि वडा अध्यक्षको तजविजबाट वितरण हुन्छ ?
हामीले गाउँपालिका तहबाट निर्णय गछौं । अनि सोहि बमोजिम वडा अध्यक्षले वितरण गर्नु हुन्छ ।
खाद्यान्न अभावका कारण त्यहाँका मानिसहरु समस्यामा पर्दैनन भनि बुझ्दा हुन्छ ?
त्यस्तो होईन । अहिले सम्म हामीहरुले त्यस्तो हुन दिएका छैनौ । समस्या त थुप्रै छन् । तर हामीले अहिले सम्म भोकै मर्ने अवस्था आउँन दिएका छैनौ ।
स्वास्थ्य उपचारका दृष्टिले असाध्यै कठिनाई भएको स्थिति छकि छैन ?
सवै भन्दा डेलिभरीमा समस्या देखिन्छ । अलिअलि हुने खाने मान्छेहरुले त आफै गाडि मगाएर पनि समाधान गर्नु भएको छ । तर विपन्न वर्गलाई अलि समस्या हो । त्यस्ता मानिसहरुलाई समस्या आयो भने हस्पिटल सम्म पु¥याउँने जिम्मा गाउँपालिकाले लिएको छ । उनिहरुलाई गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स मार्फत निशुल्क पु¥याएको छौ । मैले सवै भन्दा मुख्य समस्या डेलिभरीकै देखेकि छु ।
त्यहाँबाट रिफर भई घोराही उपचारमा आउने विरामीहरु सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको त छैन नी ?
त्यस्तो भएको त केहि छैन ।
अव वजेट अधिवेशन हुन र वजेट भाषण पनि गर्ने होला, कहिले गर्ने सोच्नु भएको छ ?
समय आउँदैछ । वडाभेलाहरु गर्न बाँकि छ । योजना तर्जुमा गर्न बाँकि छ । क्वारेन्टिनमा भएका जतिलाई स्वाव संकलन गरी पी.सी.आर.जाँच नगर्दा सम्म वजेट अधिवेशन तथा योजना तर्जुमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । क्वारेन्टिनमा वसेका जति सवैलाई जाँच गरेर नेगेटिभ जतिलाई घर पठाउँने र पोजेटिभ जतिलाई आइसोलेसनमा राखेर मात्र अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । सामाजिकदुरी कायम गरेर कामकाजलाई अघिबढाउँने पक्षमा छौं । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७को योजनाहरुको फागुनमै भुक्तिानी गरि सकेका थियौ । त्यस कारण सहज भएको हो ।
क्वारेन्टिमा वसेका विरामीहरुलाई आरडिटि परिक्षण गर्नु हुन्छ कि पि.सि.आर. जाँच हुने हो ?
हामीले धेरै जसोको पी.सी.आर. गरेका छौं । उन्सट्ठी जनाको आर.डी.टी. भएको छ । पाँच सय नब्बे जनाको पी.सी.आर. भएको छ । हिजो र आजको तथ्याङ्क लिन बाँकि रहेको छ ।
पीसीआर गरेको रिपोर्ट कति समयमा आउछ ?
पीसीआर रिपोर्ट घोराहीको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट आउने हो । कहिले २, ३ वा ४ दिन लाग्छ ।
अहिले सम्म क्वारेन्टिनबाट नेगेटिभ देखिएर कति जना घर जानु भएको छ ?
अहिले सम्म क्वारेन्टिनबाट एउटा विद्यालयमा वसेका एकसय विस जना र अर्को विद्यालयमा वसेका सोह् जना गरी कुल एकसय छत्तिस जना सवैकोे रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उहाँहरुलाई घर पठाएका छौ ।
एउटा क्वारेन्टिमा केहि जनाको पोजेटिभ र केहि जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएमा उनिहरुको सहि व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ?
धेरै जना मध्ये केहिजना पोजेटिभ र केहि जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भने पोजेटिभ जतिलाई आइसोलेसनमा र नेगेटिभ रिपोट आएका जतिको पुनःजाँच गरेर फेरी पनि नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भने मात्र घर पठाउँने गरेका छौं । एकसय एकतिस जनाको रिपोट आज बेलुका आउँनेछ । आजको रिपोर्ट हेर्न बाँकि छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरुले के जिम्मेवारी लिनु भएको छ ?
सवै व्यवस्थापनको जिम्मा प्रशासन र विपद व्यवस्थापन एवं स्वास्थ्य शाखालाई दिएका छौ । जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यक व्यवस्थापकीय योजना निर्माण तथा नीतिगत निर्णयहरु गर्ने एवं आवश्यक वजेट विनियोजन गर्ने जस्ता अभिभावकिय नेतृत्व गरि रहेका छौ । साथै जनताका प्रत्यक्ष समस्याहरुको पहिचान र परिचालनको काम गरि रहेका छौ ।
आइसोलेसन अस्पतालका वेडहरु बढाउन कुनै योजनाहरु छन कि ति वेडहरु नै प्रयाप्त छन् ?
हामीले अहिले सम्म पचास वेडको आइसोलेसन सञ्चालन गरेका छौ । त्यस मध्ये चालिस वेड प्रयोगमा आएको छ । हामीसंग अब दश बेड प्रयोगमा आएको छैन । हामीले अझै दशबेट थप्ने योजना बनाएका छौ । हामीसंग वडा नं १ बोझ पोखरामा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रको नयाँ भवन छ । त्यो भर्खरै एक डेढ बर्ष पहिले निर्माण गरेको हो । त्यो भवनमा वाइस कोठा रहेका छन् । त्यसैमा दश वेड थप्ने योजना बनाएका छौं ।
जनस्तरबाट लकडाउनको पालना कत्तिको भएको छ ?
जनता सवै साइलेन्ट छन् । चार नंवर वडामा सुरुमै चार जनालाई पोजेटिभ देखियो । त्यो वडामा माखा पनि घुम्दैन । अनि ५ नंवर वडालाई पुरै सिल गरिएको छ । त्यो वडामा कुनै मान्छे घुम्दैन । अन्य वडामा बजार जाने आउने कुनै चहलपहल पनि देखिदैन । अनि हप्ताको आईतवार, मंगलवार र शुक्रवार हामीसंग भएको साना वजारहरु खोलेर व्यापारीहरले जनतालाई आवश्यक सामानहरु उपलब्ध गराउनु भएको छ ।
हजुरको पालिकामा जेष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको संख्या र उनिहरुको स्वास्थ्य सुरक्षावारे के योजना बनाउनु भएको छ ?
जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या हाम्रो पालिकामा ६ सय रहेको छ । गर्भवती महिला ४८ जना रहेका छन् र सुत्केरी महिलाहरुको संख्या १६३ जना रहेको छ । उनिहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे अरु त के गर्न सिकन्थ्यो र उनिहरुमा कोरोना सम्वन्धी सचेतना जगाउने, स्वास्थ्यकर्मीहरुको सम्पर्कमा रहने र पोषिलो आहार लिने भनेका छौं । अरु त्यस्तो केहि गरेका छैनौ । अव यसका वारेमा पनि थप योजना तत्काल बनाउने प्रयास गर्नेछौ ।
यो संकटको वेला प्रदेश सरकार , केन्द्र सरकारले कुनै आर्थिक सहयोग गरेको छ कि छैन ?
स्वास्थ्य सामाग्रीहरु हामी आफैले खरिद गरेका छौ । प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकारले स्थानीय तहको लागि त्यस्तो कुनै पहल गरेको छैन । अहिले सम्म हामी आफैले मागेका पनि छैनौ । अहिले सम्म नमागे पनि अव माग गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । माथिबाट कुनै सहयोग दिए लेउछौ । यदि सहयोग आएन वा दिइएन भने पनि हाम्रो गाउँपालीकाका जनतालाई भोक र रोगले मर्न दिदैनौ भन्ने वाचा गरेका छौ । हामीले त्यसलाई जसरी पनि पुरा गर्नेगरि तयारीमा जुटेका छौ ।
लकडाउनका सन्दर्भमा हजुरले आफ्ना जनतालाई मिडिया मार्फत केहि भन्न चाहाँनु हुन्छ ?
हजुर सम्पूर्ण बंगलाचुली गाउँपालिकाका जनताहरुलाई म के भन्न चाहाँछु भने यो अत्यन्तै महामारी र संकटको वेला हो । यस गाउँपालिकामा जति हुनुहुन्छ सुरुक्षित भएर वसी दिनु होला । लकडाउनको नियम पालना कडा मेहनतका साथ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु । हामी कदममा कदम मिलाएर मात्र यो महामारीलाई जित्न सक्छौ । त्यसैले सवैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट संघर्षमा टेवा पुग्ने गरी परिचालन हुनु पर्दछ ।
-हस यहाँले हामीलाई आफ्नो अमुल्य समय उपलब्ध गराई दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद
-यहाँ र यहाँको लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका दैनिक अभियान डटकमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद । मेरो विचार जनतामाझ स्पष्टरुपमा पु¥याउन सहयोग गर्नु भएको छ । यो पत्रिका निरन्तर अघि बढोस र जनता दैनिक आईपर्ने सुख–दुःख संग सहकार्य गरोस धन्यवाद !